Inta badan, Final Cut Pro X weyn ka shaqeeya. Laakiin, marka ma aha, halkan waxaa ku qoran waxyaabo aad isku dayi kartaa si aad u hesho nidaam caadi ah dib u waqti.
Halkan liiska deg deg ah:
1. Jooji iyo guuleysatey Goo Final
2. Hubi warbaahinta aad
3. Delete la moodo files iyo dib-u-ka abaalmarin
4. Samee maktabad cusub oo
5. Abuur ah user account cusub
6. Qashinka FCP X rabtid
7. Ka qaad iyo dib-u-soo dajiyo Goo Final
Howleheedii daayo Goo Final iyo qabowjiyaa xasuusta si haddii wax wareeriya habka, howleheedii Goo Final wax ka qaban karta.
Inta badan, dhibaato waxaa keena weli sawirada aad u weyn. Xaddid photos digital inay wax ka badan 5,000 oo pixels dhinac ah. Iska yaree Final waa editor video ah, oo aan editor ah image weli. Images in ay yihiin dhibaato aad u weyn.
Sidoo kale, files footage stock yihiin aqoon inuu sababo dhibaatooyin. U hubso in aad loogu badalo oo dhan footage stock in ProRes 422 hor galinta galay Final Cut Pro X.
Fur aad Project in Timeline iyo dooran File> Delete Project siin Files. Siin files noqon kartaa musuqmaasuq. Iyaga laga eryo ciidamadii Final Goo si ay u abuuraan cusub la moodo files taas oo inta badan hagaajin doonaa dhibaatada.
4. Samee maktabad cusub
Samee maktabad cusub oo mashruuc cusub. Markaas, nuqul oo paste qeybaha kala duwan ee mashruuca jir mashruuca cusub. Tijaabi qayb kasta ilaa aad ka heshid kaalinta in uusan shaqayn. Ugu taas oo tilmaamaysa, aad ka saari kara ama beddeli warbaahinta xun.
5. sameysato akoon cusub user
Tix System Open> Xisaabaadka iyo abuuro User Account cusub. Tani resets oo dhan rabitaanadayda labada Goo Final iyo nidaamka qalliinka dib ugu soo bixin kari warshad. Dhibaatada kaliya la sameeyo tan waa in xisaabta user cusub ma heli karaan faylasha lagu kaydiyaa buugga Home of xisaabta user jir ah. Sababtan awgeed, waxaan mar walba ku talinaynaa kaydiyo dhammaan maktabadaha ku drives adag dibadda, ma Home Directory ah.
Tix FCP X 6. Trash
Qashinka Final Cut Pro X files doorashada. Waxaa jira ugu yaraan saddex files doorashada iyo, haddii aad lahayd shil, waxaa uu noqon karaa mid. Waa kuwan tallaabooyinku:
Tag Finder ah.
Ku hay hoos u muhiim ah Xulashada iyo guji menu Go ah. Folder Maktabadda gudaha Home Directory hadda kor u muujinaysa sida xulashada ah gudaha this menu. (Waxaad sidoo kale ku qor yaabaa Shift + Command + G, ama ay doortaan Go> Tag Si gal in Finder, haddaba, nooca ~ / Library / guji Tag.)
Open si galka Library> Waxa aad rabtid.
Qashinka wax files kale oo ka bilaabmaan "com.apple.finalcut".
Guuleysatey Final Cut Pro X.
Haddii waxaas oo dhan ku guuldareysto, tirtirto FCP X ka folder Codsiyada oo dib-u-soo dajiyo ka App Mac Store .
Mid ka mid ah farsamooyinka waa hagaajin dhibaatadaada. Haddii aan, waxaa la gaarey waqtigii la xiriir Apple Support .
Iska yaree Final Pro Split Screen on MAC
> Resource > FCP > Dhibaatooyinka Talooyinka Final Cut Pro X